विराट नयाँ कीर्तिमान नजिक, धोनीको रेकर्ड तोडिने सम्भावना प्रबल ! – Everest Dainik – News from Nepal
विराट नयाँ कीर्तिमान नजिक, धोनीको रेकर्ड तोडिने सम्भावना प्रबल !
एजेन्सी । वर्तमान भारतीय क्रिकेट टोलीका कप्तान विराट कोहली नयाँ कीर्तिमान नजिक पुगेका छन् । उनले अब तीन टेस्ट खेल जित्न सके भारतका सफल कप्तान बन्ने छन् । यदि भारतले अस्टेलियासँग भइरहेको टेस्ट श्रंखला जिते विराटले नयाँ कीर्तिमान बनाउन सफल हुने छन् ।
नले आफ्नो कप्तानीमा हालसम्म ४३ टेस्टमा २५ खेल जिताएका छन् । ९ खेलमा भने हार बेहोरेका छन् । साथै, बाँकि खेल ड्र भएका छन् । अहिलेसम्म भारतीय टिमका सफल कप्तान धोनीलाई मानिन्छ । उनको कप्तानीमा भारतले ६० टेस्टमा २७ मा जित निकालेको ।
यस्तै, अब २ खेलमा विजयी हासिल गरे विराले अर्को रेकर्ड पनि बनाउन सक्ने छन् । उनले २ खेल जित्नसके विदेशी भूमिमा सर्वाधिक टेस्ट जित्ने कप्तान पनि बन्ने छन् । अहिलेसम्म कोहलीले १० टेस्ट विदेशी भूमिमा जिति सकेका छन् । यसअघि सौरव गांगुलीले ११ टेस्ट विदेशी भूमिमा जिताएका थिए ।
ट्याग्स: Mahendra singh dhoni, Virat Koholi